Acer TravelMate P2, P4 နဲ့ Spin P4 Laptop တွေကို ကြေညာ – DigitalTimes
Acer TravelMate P2, P4 နဲ့ Spin P4 Laptop တွေကို ကြေညာ
Acer HUBS NEWS Pc & Laptops
Acer က ခရီးသွားရင် သက်တောင့်သက်သာသယ်သွားနိုင်ပြီး စွမ်းရည်မြင့်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး TravelMate Series လက်ပ်တော့တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။ အခုတော့ TravelMate Spin P4, TravelMate P4 နဲ့ TravelMate P2 မော်ဒယ် အသစ် ၃ လုံးကို ချပြလိုက်ပြီး အားလုံးမှာ 11th Gen Intel Core CPU တွေ ပါပါတယ်။
လက်ပ်တော့ အားလုံးမှာ 11th Gen Intel Core Processor တွေ ထည့်သွင်းထားပြီး Iris Xe Graphics or Nvidia GeForce MX350 GPU တွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ 32GB DDR4 RAM , Thunderbolt4နဲ့ 1TB M.2 SSD Storage တွေ အထိ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ P4 နဲ့ Spin4မှာ MIL-STD-810G စံနှုန်း ပါတဲ့အတွက် အကြမ်းခံပြီး ကီးဘုတ်က ရေစက်ရေပေါက် မဝင်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
မော်ဒယ် အားလုံးမှာ Intel WiFi6နဲ့ eSIM 4G LTE တွေ ထည့်သွင်းထားပြီး Spin P4 နဲ့ P4 ရဲ့ ဘက်ထရီ သက်တမ်းက ၁၅ နာရီနဲ့ P2 က ၁၃ နာရီ ခံပါတယ်။ အားလုံးမှာ Windows Hello ထောက်ပံ့တဲ့ IR ကင်မရာနဲ့ လက်ဗွေရာ ကိရိယာတွေ ထည့်သွင်းထားသလို Webcam Privacy Cover တပ်ထားပါတယ်။
•	TravelMate P2 (TMP214-53) will be available in North America in March 2021 starting at $799.99 (Approx. Rs. 58,946)
•	TravelMate P4 (TMP414-51) will be available in North America in December starting at $899.99 (Approx. Rs. 66,314)
•	TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) will be available in North America in December starting at $999.99 (Approx. Rs. 73,683).
အဆင့်မြှင့်တင်ပေးထားသော ဒုတိယမျိုးဆက် 64MP sensor အသုံးပြုထားသည့် realme7series ထုတ်ကုန်သစ်များကို အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက်တွင် အွန်လိုင်းမှ မိတ်ဆက်ကြေညာပေးသွားရန်ရှိ လူငယ်သုံးစွဲသူများပိုမိုသဘောကျနှစ်သက်လာသည့် realme C series ထုတ်ကုန်သစ်ဖြစ်သော realme C15 ကိုပါ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းမိတ်ဆက်ပေးသွားမည်
Kirin 990E Chipset ပါတဲ့ Huawei Mate 30E Pro ကို ကြေညာ